राष्ट्रिय बीमा कम्पनी | गृहपृष्ठ
Home कम्पनि विश्लेषण राष्ट्रिय बीमा कम्पनी
कम्पनि विश्लेषण, लगानी 74 views
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले चालू आव २०७४/७५ को दोस्रो त्रैमासमा ३७ करोड २५ लाख नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा ४२ प्रतिशत बढी हो । कम्पनी रू. ४९ करोड ८४ लाख आम्दानी गर्न सफल भएकाले नाफा बढेको हो । पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको चुक्तापूँजी १ सय १४ प्रतिशत बढेर रू. २६ करोड ६३ लाख पुगेको छ । कम्पनीले रिजर्भ कोषमा रू. १ अर्ब ९८ करोड छुट्याएको छ भने बीमाकोषमा रू. १ अर्ब २६ करोड जम्मा भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. ४९ करोड ७६ लाख बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । साथै, १ सय २० प्रतिशत बोनस शेयर र ५ दशमलव २६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सो प्रस्ताव कम्पनीको फागुन १० गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । प्रस्ताव बीमा समिति र कम्पनीको आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपछि शेयरधनीले पाउनेछन् । यो राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट अलग भई कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत स्थापना भएको निर्जीवन बीमा कम्पनी हो ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको चालू आवको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७३/७४ बीच तुलना गर्दा:
चुक्तापूँजीको तुलनामा खुद नाफा २ सय १० प्रतिशतबाट घटेर १ सय ३९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा दीर्घकालीन लगानी तथा कर्जा रू. ९९ करोड ९२ लाख छ ।
चालू सम्पत्ति १९ प्रतिशत बढेर रू. ३ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख पुगेको छ भने चालू दायित्व ४१ प्रतिशत बढेर रू. १ अर्ब २६ करोड ८४ लाख छ ।
कम्पनीले रू. ४९ करोड ८४ लाख ४५ हजार आम्दानी गर्दा रू. १२ करोड ५९ लाख ४१ हजार खर्च गरेको छ ।
जारी बीमालेखको सङ्ख्या ७ हजार ७ सय ८८ र नवीकरण गरेको गरिएको बीमालेखको सङ्ख्या ३ हजार ३ सय ९६ छ ।
पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीले २ सय ४४ जनालाई रू. ३ करोड ४३ लाख ८४ हजार दाबी भुक्तानी गरेको छ । यस त्रैमाससम्ममा कम्पनीको बीमाशुल्क आम्दानी, लगानी, एवम् जगेडा कोष सन्तोषजनक रूपमा वृद्धि भएको छ । साथै, कम्पनीको हालसम्मको व्यावसायिक तथा वित्तीय स्थिति व्यवस्थापनले प्रक्षेपण गरेअनुरूप भएको प्रकाशित वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
चालू आवको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिशेयर आम्दानी (वार्षिक) रू. १ सय ३९ दशमलव ७०, मूल्य आम्दानी अनुपात ९६ दशमलव ९९, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू. १ हजार ३ सय १६ दशमलव ८२ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ८ सय ४३ दशमलव ११ छ । बिहीवारको शेयरमूल्य नेटवर्थको ११ गुणा छ ।
ल विक्री चाप : कम्पनीको बिहीवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्ममा खरीद चापको तुलनामा विक्री चाप २ गुणा बढी छ । सो अवधिसम्म ३ सय ८५ कित्ता शेयर विक्री र १ सय ६५ कित्ता शेयर खरीद गर्ने माग थियो ।
ल मैनबत्ती विश्लेषण : कम्पनीकोे ५९ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा ह्याम्मर आकृति बनेको छ । यस्तो आकृतिले शेयरमूल्य बुलिश प्याटर्नमा रिभर्स हुने सङ्केत गर्दछ ।
ल आरएसआई :कम्पनीकोे ५९ दिनको कारोबारमा आरएसआई न्यूट्रल जोन (३६ दशमलव १३ स्केल)मा छ । यसले शेयर खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
ल स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन : कम्पनीकोे ५९ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन २ सय १२ दशमलव ७३ विन्दुमा छ । उतारचढाव उच्च छ ।
ल मुभिङ एभरेज : कम्पनीकोे ५९ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य १४ दिने र २६ दिने औसत मूल्यरेखाभन्दा तल छ । हालको मूल्य रू. ९ हजार २ सय ५० देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई महँगिएमा रू. १० हजार ५ सयमा प्रतिरोध पाउन सक्छ भने सस्तिएमा रू. ८ हजार ७ सयमा टेवा पाउन सक्छ ।